एमाले–माओवादीबीच यसरी भयो भागबन्डा ! कसले पायो, कसले गुमायो ? - Everest Dainik - News from Nepal
एमाले–माओवादीबीच यसरी भयो भागबन्डा ! कसले पायो, कसले गुमायो ?
एकीकृत पार्टीको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय छ जसमा प्रतिशत नभने पनि ४५ प्रतिशत माओवादी केन्द्रले पाउने र बाँकी ५५ प्रतिशत एमालेले राख्नेसमेत सहमति भएको छ ।
त्यस्तै पार्टीको स्थायी समितिमा ४३ सदस्य रहने सहमति जुटेको छ । सहमति अनुसार स्थायी समितिमा २५ जना एमालेबाट र १८ जना माओवादी केन्द्रबाट रहने छन् ।
एकीकृत पार्टीको चुनाव चिन्ह सूर्य कायम रहने सहमति भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कम्यनिष्ठहरुले साम्यवाद स्थापन गर्न लागे : देउवा
याे पनि पढ्नुस आफ्नै जीवनलार्इ यसरी सम्झिन्छन् प्रचण्ड ..